Esikhathini sethu ukuba abe usomabhizinisi kuba lula. Ukuvula amabhizinisi abo neqhaza ubuchwepheshe obusha futhi emakethe olokhu wanda. Abantu abaningi ungadikibali ku amaphupho akho futhi basebenzisa wonke amathuba ukuze sifinyelele umgomo. Nokho, kukhona labo kusadingeka ukungabaza mayelana amathemba sokusebenzela ngokwabo. Sisebenzisa enye yezincwadi, sizozama ukumemezela izizathu ezimbalwa ezenza umuntu kufanele ukuba aqalise ibhizinisi lakhe siqu.
Sebenza for inkampani futhi siphile emholweni kusho ukuthi umuntu ngeke akwazi ukuyilawula isimo sawo intela. Umnikazi okwabo has izindlela eziningana ukuze zithinte control. Uhlu izinzuzo kuhlanganisa ekhulula intela yamabhizinisi amancane, kabusha yempesheni, izinkokhelo engamancozuncozu, kanye akhawunti ekhethekile ukonga.
Ungakhohlwa ukuthi isimo emelelwa uhulumeni ngenkuthalo isekela ibhizinisi elincane. Futhi inqobo nje uma ungatholi ngezinyawo zakhe hhayi ukuqasha accountant kwabasebenzi abaqeqeshiwe, uzokwazi ukubhala-off amanani kusuka inzuzo yakho okungavamile. Uma ibhizinisi namanye amalungu omkhaya ezihilelekile, kukhona ithuba uthole ibhonasi amaphuzu.
Mhlawumbe iphuzu ezikhanga kakhulu ukuqala ibhizinisi lakho siqu ukuzimela ngokwezimali. Ngakho-ke, uma umuntu amakhono athile kule mboni, futhi ibhizinisi layo umqondo kuyoba ziphoqa, azikho preconditions ngokunginika ukuwamukela lo mqondo ukuma ithrekhi yalo ayikho.
Man akasoze abe ukhathazekile ngesimo ne ukusikeka abasebenzi, inkokhelo encishisiwe noma kokwesaba ukuxoshwa. Indoda iba umphathi yena izokhishwa kulesi simo zonke izinzuzo edingekayo, kungakhathaliseki ukuqapha esizimele ukuthuthukiswa kwebhizinisi, ikhono hambis izinto yenkampani noma ukuzimela.
Ngaphambi uvula iminyango emisha
Ngisho noma inkampani yakho ongakabi yazuza isivinini abalulekile futhi akazange abe nesikhathi ukuthi athathe indawo yakhe embonini niche, uzoba emangalisayo bamangale yokuthi indlela iminyango eminingi eyovulwa phambi umuntu amakhadi ibhizinisi okusho "CEO". Konke akatholakalanga kuwe kule minyaka embalwa edlule, manje kubonakala isithiyo ngempela zingangentaba. abalingani yakho ngeke bakuhloniphe ngenxa ubukhulu inkampani, kodwa ngenxa yokuthi wena ukwazile ukuthatha ukulawula ikusasa yabo.
Ungakwazi ukufunda amakhono amasha
Ngokuvamile, umuntu akafuni ukufunda amakhono amasha, uma usebenzela inkampani. Kungani abavumelani nombono, uma njalo yokuqondisa kabusha ukwazi okuningi umuntu? Isimo kwenzeka izinguquko ezinkulu, kubalulekile ukuba ukuziqalela amabhizinisi abo. Manje kufanele bazazi zonke izimo. Ngenxa yalesi simo, ngasendleleni, isifuthefuthe leli zwi "Uma ufuna ukwenza okuthile, kwenze wena." Ukufunda izinto ezintsha kuyoba isisekelo impumelelo okwengeziwe yephrojekthi.
Ngeke ube uchwepheshe
Manje amakhono akho namakhono uyozinika ngalé ukuthuthukiswa imibhalo computer. isisusa sakho kuzoholela eminye kakhulu kuwe. Mhlawumbe, uzothola imfundo eyengeziwe noma eduze kwaso, iya ku Izifundo zokuvuselela futhi qiniseka ukuba ube uchwepheshe wazo kuleli cala, abanothando.
Siza kusuka umeluleki
Kuyi-Internet kukhona ulwazi mayelana abantu abaye baphumelele abanye e umkhakha wakho. Uzokwazi ukukhetha umeluleki kweqiniso futhi uxhumane naye uma udinga usizo ekuxazululeni lezo noma ezinye izinkinga. Ayikwazi sokungabaza ukuthi inani labantu bezimisele ukusiza Wabasaqalayo osomabhizinisi abanamakhono. ibhizinisi siqu akabashiyi zithuthukisa ukuhoxa, kanye nesidingo ukuthola usizo uchwepheshe kuyinto lukwazi ukushukumisa ngendlela enhle ngawe.
Yini udinga ukuqala ibhizinisi?
Odinga ukuhlanganyela emsebenzini ebhizinisi, - it is kuphela ukuzimisela kwakho siqu. Ayikho ithonya ngaphandle awukwazi ukugxambukela kule. Ingabe namanje angabaze futhi akazange alinge ukuthatha isinyathelo sokugcina iyona ebaluleke kakhulu? Kungani? Fakazela ikakhulukazi ngokwakho ukuthi impumelelo yangempela. Kungenjalo, esikhathini esizayo uyohlale uzisole abawayeka.
ukuzinikela yakho luvule indlela eya amakhono ukuzethemba. Khumbula kaningi kangakanani ngaphambi waphuma zabo ukuba bathole ukukhuthazwa kumqashi, nozakwethu yokudumisa nokubonga kumakhasimende? Manje konke ongasakudingi. Yiqiniso, ukuba boss, nawe kudingeka bakwethembe. Kodwa umuntu oyedwa kuphela kuzothatha wemfanelo wokwenza izinqumo. Futhi lo muntu - umsunguli inkampani.
Ikhono ukudala amathuba emisebenzi
Manje banethuba eliyingqayizivele ekwakheni imisebenzi emisha. Emakethe yezabasebenzi kukhona nesidingo esikhulu sezindawo imisebenzi. Awukwazi kuphela ukusiza abantu bathole umsebenzi, kodwa futhi isibopho phakathi amabhizinisi amancane eqenjini wakho wokuxhumana nomphakathi.
Impela, ukwenza ibhizinisi kuhilela omningi ubungozi, ukutshalwa kwezimali, umsebenzi esindayo futhi kanzima. Kodwa uyothola imivuzo impumelelo ngesikhathi lapho ekugcineni umsebenzi onzima kugcina kunomphumela. Amaholo, amabhonasi kanye namandla-ups ukuthi wathembisa abaphathi wangaphambili kubonakale encane ngakho kuqhathaniswa uzuza wangempela ibhizinisi lakho siqu.
The kungenzeka ukwakheka emakethe
Imibono emisha ibhizinisi obusingethwe ukuphila, ayibi yini njengento engelutho nomthelela ekwakhekeni emakethe. Manje uzokwazi ukuba abe umhlanganyeli egcwele inqubo, hhayi umhlaziyi esihlalweni. Ngisho noma ezinye imibono ngeke aphumelele, uzokwazi ukuba ngeqholo uhlukanise ngokwabo njengoba kuyingxenye ebalulekile yenqubo emakethe.
Ithuba lokwenza umlando
Kucalisa inkampani yakhe, umuntu ngaleyo ndlela okuhambisa ucezu umphakathi uqobo. He uthola ithuba ukwenza umlando, kokuba atshalwe konke amaphupho nemigomo yawo.
Siziqhenye ingane yabo
Uyaziqhenya ngomsebenzi owenziwa egazini wanoma yimuphi umuntu, ngisho nobe loyo muntfu umsebenzi. Nokho, umnikazi wenkampani kubhekene umuzwa okhethekile nengane. Zonke okuphumelela yenkampani lubonakala ngaso sonke isikhathi ukuzethemba boss sika, wokugxilisa ngayo lutho umqondo elingenakuqhathaniswa nokuziqhenya.
Wena kuzodala ifa
Umuntu ngamunye ecabanga indlela izingane zabo, ngibafisele inhlanhla nempumelelo ezinhle. Kodwa uma wakwazi ukwakha inkampani yakhe, ungakwazi ushiye ke njengoba ifa abangenekayo ezinganeni zabo, futhi, esikhundleni salokho, balidlulisele ezinganeni ngenzalo yabo. Ngakho, ibhizinisi lakho lomndeni, adlula ezizukulwaneni ngezizukulwane, qhubeka emzamweni wakho iminyaka leminyenti.
Ungakhohlwa ukuthi abantu abaningi babuka wena, indaba yakho uzothola ugqozi yabo isinyathelo esiwujuqu kunanini ngaphambili. Kuyinto enhle kangaka - wake up usuku olulodwa bese ngiyabona ukuthi isibonelo sakho siqu ilethe omunye. Nenze umsebenzi omkhulu manje awusakwazi ngokwabo ngokuthi umeluleki osomabhizinisi Ezifuna.
Ngiyavuma ukuba abe ngumnikazi webhizinisi yimpumelelo a is nicer okuningi futhi onodumo kuka babe "isisebenzi lwenyanga" noma umuntu ukuthola umklomelo. Oluphethe elichumayo kusho ukuqashelwa isikhathi eside, futhi lesi sisebenzi uyaneliseka iphromoshini yesikhathi esifushane kuphela.
Ukukwazi ukuqamba brand ayo
Man, imiqondo yabo siqu, kodwa zibonisa umbono wakhe siqu engokoqobo. kufanele kuncike ayisekho ngokuphelele isimo boss yabo futhi ukulinda, uma ayamukelayo umqondo omuhle. Ukuthuthukisa yesimanje design, ilogo, ukuthuthukisa inkampani yakho uquqaba, ukuthuthukisa imikhiqizo yayo, kumnikazi wenkampani ukudala umkhiqizo liyabonakala.
Uma umkhiqizo Kumiswa, uzothola ithuba eliyingqayizivele ukubeka izinsiza empilweni. Guqula wonke ikhono lakho umkhuba izosebenzisa nemibono. Yazi ukuthi umsebenzi akakubekezeleli Ukuphumula. Uma ungenalo ukuqeqesha njalo, ngeke enjalo ekubhekaneni.
"MegaFon" opharetha: indlela ukubiza uma kukhona imibuzo
Breathing ngesikhathi sokubeletha